မြန်​မာပြည်​ ကို အ​ရေး တကြီး ​ရောက်​လာ​သော မိတ်​​ဆွေ – Thadin Media
မြန်​မာပြည်​ ကို အ​ရေး တကြီး ​ရောက်​လာ​သော မိတ်​​ဆွေ
January 22, 2018 aPloitical
နိုင်​ငံတကာ သတင်းများတွင်​ ရုရှားနိုင်​ငံ၏ ကာကွယ်​​ရေး ဝန်​ကြီး Sergei Shoigu ကို​တွေရခဲသည်​ အ​ရေးမပါ​သောကိစ္စများတွင်​ ၎င်းကာကွယ်​​ရေး ဝန်​ကြီးကိုမ​တွေရပါ
ရုရှားနိုင်​ငံမှ အခုလိုအချိန်​မျိုးတွင်​ အ​ရေးတကြီး​ရောက်​လာခြင်းသည်​ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွက်​ အထူးအားတက်​ဖွယ်​​ကောင်းပါသည်​။
မြန်​နိုင်​ငံ၏ လက်​ရှိအ​ခြေအ​နေအရပြည်​တွင်း/ပြည်​ပ နိုင်​ငံ​ရေး စစ်​​ရေး အ​ခြေအ​နေမှာ -အနုတ်​လက္ခဏာပြ​နေချိန်​တွင်​ မိတ်​​ဆွေ​ကောင်းပီသ​သောရုရှားသမ္မတနိုင်​ငံ​တော်​ကို ​ကျေးဇူးတင်​မိပါသည်​။
နိုင်​ငံတကာ သတင်းများတွင်​ မြန်​မာနိုင်​ငံနှင့်​ အိမ်​နီးချင်း
ဘင်္ဂလား​ဒေ့သို့ ကုလသမ္မဂ္ဂမှ UN တပ်​များ​ရောက်​လာပြီး
​နောက်​တစ်​ရက်​ ရုရှာနိုင်​ငံမှ ကာကွယ်​​ရေး ဝန်​ကြီး​ရောက်​​ရှိလာခြင်းသည်​ မြန်​မာနိုင်​ငံအတွက်​ ထူးခြားမူတရပ်​ဖြစ်​လေ​သည်​။ ​ရောက်​လာ​တော့လဲ ငှက်​အစိုးရအဖွဲ့ဝင်​များနှင့်​ မ​တွေ့ဆုံဘဲ မြန်​မာတပ်​မ​တော်​ ကာကွယ်​​ရေးဦးစီးချုပ်​နှင့်​
ဒုတိယ ကာကွယ်​​ရေး ဝန်​ကြီးတို့ကို​သာ တွေ့ဆုံ​ဆွေ​နွေးပြီး နှစ်​နိုင်​ငံ မဟာဗျူဟာ​မြောက်​ စစ်​​ရေးပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​ရန်​နှင့်​ ​ရေတပ်​မ​တော်​အချင်းချင်း ချစ်​ကြည်​​ရေး ပူးပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​ရန်​တို့ကို လက်​မှတ်​​ရေးထိုးခဲ့ကြ​လေသည်​။
မြန်​မာနိုင်​ငံ တိုင်းရင်းသား ပြည်​သူလူထု အ​နေဖြင့်​ သတိထားရမည်​ အချက်​က မြန်​မာနိုင်​ငံထက်​ စစ်​​ရေး၊ နည်းပညာ၊ ​ထောက်​လှမ်း​ရေး၊ သတင်းမီဒီယာနှင့်​ နိုင်​
ငံ​ရေး အစရှိသည်​ အဖက်​ဖက်​က သာလွန်​​သော ကမ္ဘာနိုင်​ငံ ကြီးမှ အ​ရေးတကြီး​ရောက်​လာပြီး မြန်​မာနိုင်​ငံ​ မြောက်​ပိုင်း ရခိုင်​ပြည်​နယ်​
အ​ရေးကို​ဆွေး​နွေးခြင်းသည်​ ကုလသမ္မဂ္ဂ R2 P စီမံချက်​နှင့်​ အ​နောက်​အုပ်​စုတို့ ၏ မြန်​မာနိုင်​ငံ အ​ပေါ် မရိုးသား​သော လုပ်​ကြံမှုများကို ကြိုတင်​သိမြင်​၍
ကာကွယ်​​ပေးရန်​ ဖြစ်​နိုင်​ပါ​ကြောင်းနှင့်​ ………….
ရုရှားသမ္မတနိုင်​ငံ​တော်​သည်​ ဟိုအရင်​ မြန်​မာနိုင်​ငံ လွတ်​လပ်​​ရေးရပြီး​နောက်​ ဆိုဗီယက်​ ပြည်​​ထောင်​စု​ ခေတ်​ကတည်းက မှန်​ကန်​​သော မိတ်​​ဆွေ​ကောင်း
(​ရေခဲဝက်​ဝံကြီး) နိုင်​ငံကြီြး ဖစ်​ပါ​ကြောင်းကို ​ရေးသားတင်​ပြရင်​ မြန်​မာနိုင်​ငံနှင့်​ ဘင်္ဂလား​ဒေ့တို့၏
စစ်​​မက်​ရေးရာကို ​စောင့်​​မျှော်​​ လေ့လာသုံးသက်​လျှက်
နိုငျငံတကာ သတငျးမြားတှငျ ရုရှားနိုငျငံ၏ ကာကှယျရေး ဝနျကွီး Sergei Shoigu ကိုတှရေခဲသညျ အရေးမပါသောကိစ်စမြားတှငျ ၎င်းငျးကာကှယျရေး ဝနျကွီးကိုမတှရေပါ
ရုရှားနိုငျငံမှ အခုလိုအခြိနျမြိုးတှငျ အရေးတကွီးရောကျလာခွငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ အထူးအားတကျဖှယျကောငျးပါသညျ။
မွနျနိုငျငံ၏ လကျရှိအခွအေနအေရပွညျတှငျး/ပွညျပ နိုငျငံရေး စဈရေး အခွအေနမှော -အနုတျလက်ခဏာပွနခြေိနျတှငျ မိတျဆှကေောငျးပီသသောရုရှားသမ်မတနိုငျငံတျောကို ကြေးဇူးတငျမိပါသညျ။
နိုငျငံတကာ သတငျးမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အိမျနီးခငျြး
ဘင်ျဂလားဒသေို့ ကုလသမ်မဂ်ဂမှ UN တပျမြားရောကျလာပွီး
နောကျတဈရကျ ရုရှာနိုငျငံမှ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးရောကျရှိလာခွငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ထူးခွားမူတရပျဖွဈလသေညျ။ ရောကျလာတော့လဲ ငှကျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ မတှဆေုံ့ဘဲ မွနျမာတပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့
ဒုတိယ ကာကှယျရေး ဝနျကွီးတို့ကိုသာ တှဆေုံ့ဆှနှေေးပွီး နှဈနိုငျငံ မဟာဗြူဟာမွောကျ စဈရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ရတေပျမတျောအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျတို့ကို လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွလသေညျ။
မွနျမာနိုငျငံ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူလူထု အနဖွေငျ့ သတိထားရမညျ အခကျြက မွနျမာနိုငျငံထကျ စဈရေး၊ နညျးပညာ၊ ထောကျလှမျးရေး၊ သတငျးမီဒီယာနှငျ့ နိုငျ
ငံရေး အစရှိသညျ အဖကျဖကျက သာလှနျသော ကမ်ဘာနိုငျငံ ကွီးမှ အရေးတကွီးရောကျလာပွီး မွနျမာနိုငျငံ မွောကျပိုငျး ရခိုငျပွညျနယျ
အရေးကိုဆှေးနှေးခွငျးသညျ ကုလသမ်မဂ်ဂ R2 P စီမံခကျြနှငျ့ အနောကျအုပျစုတို့ ၏ မွနျမာနိုငျငံ အပျေါ မရိုးသားသော လုပျကွံမှုမြားကို ကွိုတငျသိမွငျ၍
ကာကှယျပေးရနျ ဖွဈနိုငျပါကွောငျးနှငျ့ ………….
ရုရှားသမ်မတနိုငျငံတျောသညျ ဟိုအရငျ မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးရပွီးနောကျ ဆိုဗီယကျ ပွညျထောငျစု ခတျေကတညျးက မှနျကနျသော မိတျဆှကေောငျး
(ရခေဲဝကျဝံကွီး) နိုငျငံကွီွး ဖဈပါကွောငျးကို ရေးသားတငျပွရငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒတေို့၏
စဈမကျရေးရာကို စောငျ့မြှျော လလေ့ာသုံးသကျလြှကျ
အနာဂတ်မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက်SY-400 (မှတ်ချက် KIAအတွက်မဟုတ်ပါပြည်ပရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။)
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ဆီးရီးယား နဲ့ တူရကီစစ်ဖြစ်ပြီး